Lipostabil - Mara ihe ọ bụ, uru yana ọ bụrụ na ọ dị njọ maka ahụike gị!
sliming	 23 January 2019
N'ime usoro ihe ịchọ mma dị iche iche na -ewu ewu na Brazil, mba na -eri ahụ ịwa ahụ plastik kachasị n'ụwa, a naghị ekwucha ihe dị mma maka ịgba ntụtụ. Lipostabil, aha ahia maka lipoprotein phosphatidylcholine.
N'isiokwu a, anyị ga -ekwu ntakịrị ihe gbasara iji ọgwụ a, mmetụta ya na mmeghachi omume ọjọọ. Lipostabil ọ na -arụ ọrụ? Ka anyị hụ ya ebe a, na -agụ ya!
Kedu ihe bụ Lipostabil?
Dịka m kwuru n'elu, Lipostabil bụ aha azụmaahịa enyere phosphatidylcholine, nke enwere ike ịhụ na akpụkpọ ahụ ma na -eme ka mkpochasị abụba mpaghara dị mfe, n'ihi na ọrụ ya bụ isi na -enyere aka akpụkpọ ahụ aka ma na -emekọ ihe na lipases enzymes, nke bụ enzymes. na -akụri abụba.
Lipoprotein a bụ ọrụ maka iwepu abụba na sel ma meziwanye ahụ ike ya, gbanwee ya ka ọ bụrụ ume. N'ihi nke a, Lipostabil bidoro tinye anya ya na nlebara anya, ebe etinyere ya na mpaghara na -agbakọta abụba mpaghara.
Ojiji a aghọọla ihe ewu ewu n'ihi na ọ na -eme dị ka liposuction, mana ọ na -adịkarị njọ ma ọ chọghị itinye ọgwụ nrịanrịa, na mgbakwunye na igosi nsonaazụ ngwa ngwa na ndị nwere obere abụba.
Emepụtara ọgwụ a na mbụ maka ọgwụgwọ embolism abụba (ọrịa nke enwere mkpokọta obere abụba abụba na mgbasa, nke nwere ike ibute nsogbu dịka nkụchi obi, akwara akwara na akwara, na -ebute embolism pulmonary). Agbanyeghị, na Brazil, National Health Surveillance Agency (ANVISA) machibidoro iji ọgwụ a mara mma, ma n'ihi mmetụta ọjọọ ya na enweghị ọmụmụ gbasara ihe ụdị ọgwụgwọ a nwere ike ibute ogologo oge.
A machibidoro iwu ugbu a iji ma ree ụdị ọgwụ a n'ókèala Brazil. Mana na ịntanetị ị ka nwere ike ịchọta Lipostabil ịzụta n'ọtụtụ weebụsaịtị.
Kedu maka ya? Kedu ka o si arụ ọrụ n'ime ahụ?
Lipostabil site na ngwa na -agbaze obere mkpokọta abụba n'akụkụ dị iche iche nke ahụ anyị, dịka nkuchi anya, n'okpuru chiiz, afọ, na ndị ọzọ. Na -eme ka abụba ndị a gbanwee ghọọ ume ma ọ bụ wepụ ahụ anyị.
Nke ahụ bụ, ọgwụ na -arụ ọrụ site n'ịkwalite mwepụta nke abụba intracellular yana meziwanye ọdịdị anụ ahụ. Na mgbakwunye, itinye Lipostabil nwere ike ịnye uru dịka:
Na -agbada ọkwa LDL, cholesterol ọjọọ.
mgbochi ọrịa obi
Ọkụ a na -ahụkarị na mpaghara na -ere ọkụ
Mbelata nha na nha nha
Ọgwụgwọ ọrịa dịka pulmonary embolism na atherosclerosis.
Marakwa ihe Saxenda na ka ọ ga -esi nyere gị aka!
Kedu otu esi etinye Lipostabil (okirikiri)?
Maka ebumnuche ịchọ mma, a na -etinye ngwa subcutaneous n'ebe enwere abụba buru ibu, dị ka apata ụkwụ, isi ukwu, apata ụkwụ dị ala, azụ ala na ọbụlagodi na mpaghara ndị nwere mmetụta dịka '' ihe ọkụkụ '' na nku anya.
A na-eme ntụtụ site na agịga dị oke mma yana ngwa dị ihe dịka 2cm. A na -emegharị nnọkọ n'ime ụbọchị iri na ise ruo ụbọchị iri abụọ. Nke a pụtara na iji nwee mmetụta ọ bụla a na -ahụ anya, ị ga -emegharị ngwa ahụ maka nnọkọ ole na ole. Agbanyeghị, ka onye ọrịa na -eto, a ga -enwe ntakịrị nnọkọ iji nweta nsonaazụ ya
Enwere obere ahụ erughị ala na ịgba ntụtụ n'onwe ya, ọ na -abụkarị saịtị ahụ na -acha ọbara ọbara. Mgbe itinyechara ya n'ọrụ, enwere ike inwe itching na ọzịza, na mgbakwunye na mgbu n'akụkụ ebe na -adịgide karịa otu ụbọchị.
Kedu mmetụta dị n'akụkụ ọgwụ ahụ?
N'ime mmeghachi omume ọjọọ nke Lipostabil bụ:
Mgbu na saịtị ngwa
Ahụhụ nke anụ ahụ na nke mmụọ (ịkpọ isiala)
nsogbu nke eriri afọ
Ejiri nnwale subcutaneous nke phosphatidylcholine mee nnwale anụmanụ. Ọtụtụ anụmanụ nwụrụ n'ihi mmetụta dị oke egwu, nyocha mere kpughere mgbanwe biochemical na arụ ọrụ imeju.
Ọ bụ ezie na maka ebumnuche ebumnuche nke ngwaahịa ahụ, egosighi nsị, n'ihe gbasara ngwa subcutaneous, enweghị ọmụmụ zuru oke na nchekwa nke usoro a, nke na -adọ aka na ntị maka oke mkpa ndụmọdụ ndụmọdụ ahụike maka iji ọgwụ a.
Ndụmọdụ: Gụkwuo ọdịnaya n'ime ederede gbasara ndị na -egbochi agụụ!
Enwere Lipostabil na mbadamba (capsules)?
Nwere ike ịchọta Lipostabil n'ụdị mbadamba. Na -ere n'ụdị Phosphatidylcholine, ọ na -abịa na karama nwere 60 capsules nke 420mg. Ị nwekwara ike ịhụ nsụgharị ndị ọzọ na ịntanetị.
Ọ dị njọ? Kedu ihe bụ contraindications?
Ọ bụrụ na ejighị ya nke ọma, ọgwụ nwere ike imerụ ahụ gị. Ọgwụgwọ nwekwara ike iwepụta ụfọdụ nsonaazụ, nke anyị kwuru n'elu.
Ọgwụgwọ Lipostabil ekwesịghị ime site na:
Womenmụ nwanyị dị ime ma na-enye ha ara
Ndị nwere nsogbu ọgbụgba
Ndị mmadụ na -anabata nsị soy
Ndị nwere nsogbu imeju
Ndị mmadụ na -eji ọgwụ ụfọdụ aga n'ihu
Ndị nwere oke mmụọ.
Ebe ịzụta? Ego ole?
Ọbụlagodi mmachibido iwu Anvisa na ojiji na ire Lipostabil na Brazil, ị ka nwere ike ịhụ ọgwụ a na webụsaịtị pụrụ iche. Ọtụtụ mgbe ọnụahịa ngwaahịa a na -adabere dabere na ọnụọgụ na ampoules, mana igbe nwere ampoules 5 nke 5ml nke ọ bụla nwere ọnụ ahịa nke R $ 130.
E kwuwerị, ọ na -arụ ọrụ n'ezie? M ga -ebu ibu?
Dịka anyị kwurula n'isiokwu a niile, ngwaahịa a abụghị ọgwụ na -eme ihe ozugbo na oke ibu, ọ na -eme naanị na mbelata abụba mpaghara.
Mana Lipostabil nwere ike inye aka n'ịsacha abụba dị n'ime sel anyị, na -eme ka ha ghọọ ike ka ahụ anyị wee mee ya, si otú a na -enye mfu nke nha. Agbanyeghị, nsonaazụ ọ nwere ike nye nwere ike ịhụ nke ọma na ndị nwere obere ngafe iji kpochapụ.
Nkwenye bụ itinye ego n'iji ngwaahịa yana nri kwesịrị ekwesị yana mmega ahụ kwa ụbọchị maka nsonaazụ kacha mma. Chọọkwa ọkachamara ahụike maka ntule ka mma, na -echeta mgbe niile iji ngwaahịa (okirikiri) mee nke ọma.
Kedu ka esi eme metabolism? Pịa ebe a wee hụ akụkọ zuru oke na isiokwu ahụ!
Nhọrọ ndị ọzọ sitere na Lipostabil
Enwere ụfọdụ ụzọ ọzọ sitere n'okike na -enyere aka inwe otu nsonaazụ dị ka Lipostabil nwere nnukwu uru na ha enweghị mmetụta ọ bụla na enwere ike iji ya na -enweghị ndenye ọgwụ, n'ihi na ha bụ ihe mgbakwunye nri na -enye ahụ ahụ vitamin na nri ọ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma. ma si otú a nwee mmetụta ndị a chọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ụzọ ndị a, anyị edepụtara gị nke kacha mma n'okpuru. Zute!
Quitoplan abụghị naanị mgbakwunye eke, ọ bụ mmemme ịbelata oke ibu ebe ị nwere ike nweta akwụkwọ e-akwụkwọ nwere ndụmọdụ iri nri, nnọchi ahụike, usoro nri zuru oke maka ị ga-eso, ngwa na-enyere gị aka ịchịkwa ibu gị. nri na mmalite nke oke ibu gị yana ị na -enwetakwa capsules nke na -enyere aka ịbawanye metabolism, na -eme ka ahụ na -agbakwu abụba, na -egbochikwa ahụ ịmịkọrọ abụba na nri ị na -eri.
Na webụsaịtị Quitoplan ị nwere ike ịchọta ozi niile gbasara ngwaahịa a, ezigbo akaebe sitere n'aka ndị jisiri ike felata n'iji ya, yana nghọta ka mma maka otu o si arụ ọrụ na ihe kpatara o ji eweta uru ndị a niile.
Usoro ya nwere naanị ihe ndị sitere n'okike, yabụ ahụ na -eme ngwa ngwa maka ojiji ya, yabụ nsonaazụ ya na -adị ngwa ngwa. Nke kachasị, ọ bụ usoro na-enweghị mgbu, ebe ọ bụ naanị na ị ga-ewere capsules Quitoplan abụọ n'ụbọchị wee bulie nsonaazụ gị na atụmatụ iri nri.
Pịa ebe a wee mụtakwuo ihe gbasara Quitoplan yana ka ọ ga -esi nyere gị aka!
Ị nwere nhọrọ ịzụta ụdị ngwa ahịa atọ, nke nwere ike zuru ezu maka otu ọnwa, ọnwa atọ ma ọ bụ nnukwu ngwa maka ọnwa ise.
Họrọ nke kacha mma maka ebumnuche gị n'okpuru wee nweta nsonaazụ site na okike na emerụghị ahụ ike gị.
Ntụziaka Carb dị ala
Maka ịbelata ibu dị mma ma dị irè ọ dị ezigbo mkpa inwe nri kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ oge anyị na -agba ọsọ kwa ụbọchị, anyị anaghị enwe ike ịhazi onwe anyị, anyị na -emecha rie ihe karịa ka anyị kwesịrị. Mana echegbula, otu n'ime ụzọ ọzọ ekepụtara nke anyị depụtara ebe a bụ akwụkwọ e-akwụkwọ zuru ezu 101 obere carb Ezi ntụziaka nke ahụ ga -enyere gị aka ifelata, nweekwa ahụ ị na -arọbu na mbụ.
Enwere usoro nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị, ihe ụtọ na -atọ ụtọ na ọbụna ego dị ịtụnanya ga -enyere gị aka iru oke oke gị.
Mgbe ahụ ị masịrị ederede ahụ? Echefula ịhapụ okwu gị wee kesaa ya na ndị enyi gị!
Kedu otu esi ewere nha nke aru? Ndụmọdụ iji tụọ nsonaazụ gị nke ọma!
Bulking Diet: Kedu ihe ọ bụ? Olee otu o si aru oru? Lee ozi ebe a!
Ọgwụ Anti-inflammatory: Mara ihe niile gbasara ha!